Shine Like Platinum - IP3 Enterprise-Class Router | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » အဆိုပါ IP3 လုပ်ငန်း-Class Router - ပလက်တီနမ်လိုပဲ Shine
အဆိုပါ IP3 လုပ်ငန်း-Class Router - ပလက်တီနမ်လိုပဲ Shine
သငျသညျတခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-လူတန်းစား, IP ကို-အဆင်သင့် router ကိုလိုအပ်နေခုနှစ်တွင်ရှိပါသလား အဘယ်သူမျှမနောက်ထပ်မကွညျ့ - ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သငျသညျဖုံးအုပျပွီ! အဆိုပါပလက်တီနမ် IP3 Multi-path ကို routing ခလုတ်လျင်မြန်စွာရောနှောထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုဦးဆောင်ဘို့တစ်ဦးကအံ့ဖွယ်လျှော-In သည်မှ အကြိုက်ဆုံး ဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းဈေးကွက်လက်မှတ်ပေါ်မှာအနေအထား!
50 ထက်ပို ပလက်တီနမ်™ IP3 Multi-path ကို routing ကို Switcher မကြာသေးမီလများအတွင်းဥရောပထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦမှပေးပို့ပြီးပါပြီ။ ဥရောပအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တလျှောက်လုံးအများအပြားအသစ်နှင့်ထုတ်လွှင့်ထရပ်ကားများအပြင်ဘက်သို့အဆင့်မြှင့်အတွက်ရှိပြီးသားက de facto စံ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' ဆန်းသစ်သောပလက်တီနမ် Router ကနည်းပညာကိုအရှက်ကွဲခြင်းသည်အခြားပြိုင်ဘက်ချပြီးနေပါသည်!
ဗီဒီယိုက programming ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် I / O ၏ 1,000s လိုအပ်ကြောင်းကြီးမားသောအမျိုးသားရေးထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်ကွန်ရက်အချက်အချာ Multichannel ရန်, အကြီးစား routing ကိုလိုအပျကွောငျးအသံလွှင့်ကုန်တင်ကားပြင်ပကနေ, ဒီကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-စကေး IP3 router ကိုသာရောထွေးပေါင်းစပ် - applications များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်စံပြ ဗွီဒီယိုနဲ့အသံလမ်းကြောင်း, မြင်ကွင်းစုံလုပ်ဆောင်ချက်ကို, mux / demux, frame ကိုထပ်တူပြုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော MADI နှင့်ဖိုက်ဘာအဖြစ်အဆင့်မြင့် I / O ရွေးချယ်စရာ -format, သူတို့ကအားလုံးအဆင်ပြေအာကာသ-saving ဘောင်အတွင်းထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
Clark ကမီဒီယာ၏ထုတ်လုပ်သူ HD မိုဘိုင်းကုန်တင်ကားများနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်ကိရိယာများမှပေါ်တော်လှန်ရေးသမား router ကိုများအတွက်သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုး NAB ပြရန် ယခုနှစ်ရဲ့စည်းဝေးကြီးမှာကြမ်းပြင်။
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ထက်ကျော်လွန် 4K ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်သောကြောင့် clients များအများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နည်းပညာရွေးချယ်စရာပူဇော်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကို enable မယ်လို့နည်းပညာသစ်များဖော်ထုတ်များ၏တိကျသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ NAB ဆီသို့ရောက် လာ. ," ဂယ်ရီ Snyder, ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အင်ဂျင်နီယာ, Clark ကမီဒီယာကဆိုပါတယ်။
Clark ကအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါသူတို့ရဲ့၌ 'ပလက်တီနမ်9ru နှင့် 15 ru HD သူတို့ကပလက်တီနမ်မိသားစုများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသည်ဒါစနစ်များကို-pack ကိုပျံသန်း။ ထူးခြားအံ့ဖွယ် IP3 ၏ပထမဦးဆုံးလက်ဆန္ဒပြပွဲများကိုမြင်ပြီးနောက်, သူတို့ကနည်းပညာတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာအဖြစ်အိုင်ပီဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလမ်းကြောင်းပေးအပြင်ကသူတို့လက်ရှိ 3G နှင့် 4K အချက်ပြမှုများ၏အပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်မယ်လို့ချက်ချင်းယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြောင့်, HD/ 4K ထရပ်ကားသူတို့ဘက်၌တရားအရောင်းပြခန်းကြမ်းပြင်ပိတ်ပလက်တီနမ် IP3 Router က system ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါလိမ့်အလွန်ကံကောင်းခဲ့ကြသည်, ဆောက်လုပ်ဆဲလက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်က HD/ 4K မိုဘိုင်းထရပ်ကားလုံးဝ router ကိုဗဟိုပြုဖြစ်လိမ့်မည်, ဒီတော့ဒီကျနော်တို့ 3G, 4K နှင့်ပင် IP ကိုထောကျပံ့ပေးဖို့လိုအပျသောအနာဂတ်၏ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားတည်ဆောက်ရန်မျှော်ကြည့်သကဲ့သို့ငါတို့ဖန်ဆင်းသောအရေးအပါဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ "ဟု Snyder ကရှင်းပြသည်။
အဲဒီမှာစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၎င်း၏ပွဲဦးထွက်ကတည်းကတည်ငြိမ်နေခဲ့သည်သောပလက်တီနမ်™ IP3 Router က, အဘို့ခိုင်ခံ့ဝယ်လိုအားဖြစ်ပြီး, ချက်ချင်းသည်၎င်း၏ပွဲဦးထွက်အပျေါမှာတစျယောကျတညျးဥရောပနှင့်အာဖရိကမှနီးပါးနှစ်ဒါဇင်အမိန့်နှင့်အတူစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအရှိန်အဟုန်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခိုင်ခံ့သောဖောက်သည်ဝယ်လိုအားအပြင်, ထုတ်ကုန်မြောက်မြားစွာစက်မှုလုပ်ငန်းဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်မှသူများအပါအဝင်များစွာသောဂုဏ်သတင်းဂုဏ်ထူး, ရရှိထားသူ IABM ဒီဇိုင်း & ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ဘေဂျင်းမှာရှိတဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများအတွက် BIRTV ဆုချီးမြှင့်, တရုတ်နှင့်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ signal ကိုဖြန့်ဖြူးထုတ်ကုန်များအတွက်ဘရာဇီးအတွက် SET ပြပွဲကာလအတွင်းတစ်ဆုချီးမြှင့်မှုအတွက်ဆုပေးပွဲ။
NEP သြစတြေးလျ, Outsourcing ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ, သူတို့ရဲ့အသစ်အ State-Of-The-Art အတွက်အသုံးချမည်ဖြစ်ကြောင်းအသစ်များကို IP3 ကာမဂုဏ်ဖြစ်ပါတယ် HD 2015 ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်များနှင့်လည်းတစ်ဦးပေါင်းစပ်, တူညီတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူတစ်စက္ကန့်ထရပ်ကားများကလိုက်နာရထားတဲ့ထုတ်လွှင့်နောက်တွဲယာဉ်, ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ပလက်တီနမ် IP3 Router က။
"ကျနော်တို့ကအမြဲတစေကျွန်တော်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုစွမ်းရည်များကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်ရေတပ်အဆင့်မြှင့်နေကြတယ်" ဟုတယ်ရီ Manley, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အင်ဂျင်နီယာ, NEP သြစတြေးလျကဆိုသည်။
NEP သြစတြေးလျ Manley သည်နှင့်အညီ, တူညီတဲ့ဘောင်ထဲမှာမျိုးစုံအချက်ပြမှုများကိုပြောင်းဖို့ပလက်တီနမ် IP3 router ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတန်ဖိုးထား။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လမ်းကြောင်း multiplexing အသံဒေတာအဖြစ်အမှန်တကယ် NEP တစ်ပေါင်းကြောင်းကို discrete အသံကခွင့်ပြုသော IP3 အပေါ် MADI option ကိုပါပဲ။ အဆိုပါထရပ်ကား 32 ကင်မရာများ, မျိုးစုံပြန်ကန် devices များနှင့်မြောက်မြားစွာအရန်အသံနှင့်ဗီဒီယိုသွင်းအားစုကိုထောက်ပံ့ကတည်းကထရပ်ကားအဓိကဖြစ်ရပ်များကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အခါအဖြစ်အများအပြားခြောက်လအဖြစ်ထုတ်လွှင့်လက်ငင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်လိုအပ်ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အစင်းဒီဇိုင်းအခါပလက်တီနမ် IP3 ၏အာဏာကိုတစ်ဦးအတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်အတွက်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Manley ရှင်းပြသည်။ "အမှန်မှာကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သြစတြေးလျတိုက်ရိုက်ရှေ့မှောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာစစ်ဆင်ရေးထံမှထောက်ခံမှုရှိခြင်း၏အာမခံပေးမှာလည်းအရေးကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ "
multiplexing နှင့် de-multiplexing, signal ကိုဖြန့်ဖြူး, အသံ MADI နှင့်ခေတ်မီမြင်ကွင်းစုံစွမ်းရည်အပါအဝင်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတစ်အကွာအဝေး, ထောက်ပံ့ခြင်း, ပလက်တီနမ် IP3 Router ထုတ်လွှင့်အောင်, အစဉ်အလာထုတ်လွှင့်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကွန်ရက်များနှင့် တွဲဖက်. IP ကိုထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူစပ်ကွန်ရက်များ၏အားသာချက်ယူကူညီပေးသည် ဒါဟာ software ကို-defined ကွန်ရက်များရန်ဆင့်ကဲအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရှေးခယျြမှု။
"ကျနော်တို့ကပလက်တီနမ် IP3 router ကိုကမ္ဘာတဝှမ်းအပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့်ကုန်တင်ကားများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်ဝမ်းသာနေကြတယ်" ဟုဂျိုး Khodeir, အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, အာရှပစိဖိတ်ဆိုသည်ကား, ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ "ကျနော်တို့ကကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့် power-စှဲခြှတောလည်းလွန်ကဲကဲအစွမ်းထက်ဖြစ်ဖို့ကဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့် - ထရပ်ကားထဲမှာချုပ်ထားအာကာသများအတွက်စံပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သြစတြေးလျအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကဤစီမံကိန်းအပေါ် NEP သြစတြေးလျနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များအချို့မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်ထရပ်ကားကိုမြင်လျှင်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ဒါဟာအချက်ပြမှုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြင်ကွင်းစုံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပေးသည်အဖြစ်ဦးဆောင်ဥရောပပြင်ပတွင်ထုတ်လွှင့်ကုမ္ပဏီ CTV CTV ၏မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အများအပြားနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်း, ၎င်း၏ routing ကိုစွမ်းရည်အပြင်သည်, ပလက်တီနမ် IP3 အသုံးပြုသည်။
"ကျနော်တို့လမ်းပေါ်တွင်ထရပ်ကားယူဖို့အတွက်အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားကန့်သတ်အတွင်းတည်းခိုနေစဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထည့်သွင်းဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားအောက်မှာကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်ထရပ်ကားဒီဇိုင်း, ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်" ဟု Hamish Greig, CTV နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "ဤမျှလောက် frame ကိုထပ်တူ, mux နှင့် demux နှင့်မြင်ကွင်းစုံအပါအဝင်ပါဘူးဟာပလက်တီနမ် Router ကမိသားစု, သူကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအာကာသနှင့်အလေးချိန်ကယ်တင်အဖြစ်ပြင်ပဘောင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ဆက်စပ် cabling ဖျက်သိမ်းရေးနေဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့် - အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအားလုံးသော ဆုကြေးငွေ။ ကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်-သက်သေဖြစ်စေခြင်းငှါကူညီပေးဖို့ IP ကို ​​signal ကို routing ကိုပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်း Add နှင့်သစ်တစ်ခုထရပ်ကားများအတွက်သာပညာရှိရှေးခယျြမှုဖြစ်လာသည်။ "
ကျိန် ဆို. ပူဇော်အသုံးပြုသူများကတောင်အာဖရိကရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အားကစားရုပ်သံလိုင်း SuperSport ပါဝင်သည်နှင့်တိုက်ရိုက်-to-အိမ်မှာဥရောပအလယ်ပိုင်း ဂြိုဟ်တု နှင့် IP3 လတ်ဗီးယားရှိ၎င်း၏ရီဂါထုတ်လွှင့်ရေးစင်တာများ၏စွမ်းရည်များအရှိန်မြင့်ဖို့အသုံးပြုလျက်ရှိသည်အဘယ်မှာရှိတီဗီအော်ပရေတာ, Viasat, ပေးချေပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကြီးဆုံးအမိန့်တစ်ခုမှာ sono Studiotechnik တစ်မြူးနစ်အခြေစိုက်ထုတ်လွှင့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်မှလာနှင့် ယခုကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက်ထုတ်လွှင့်ထောက်ခံမှုပေး၎င်း၏အသစ်အ Fly-ဝေးမိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ၏စိတ်နှလုံးမှာနေရာချထားခဲ့တစ်ဒါဇင်ပလက်တီနမ် IP3 router များဝယ်ယူရာတွင်နိုင်ငံတကာငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီ, ။
"ဒီပလက်တီနမ် IP3 Router ကအသုံးပြုသူရဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးထွားအဖြစ်ကြီးထွားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်," Mathias Eckert, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, EMEA ကလည်း, ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ "Router က 2048 ၏အရွယ်အစားမှချဲ့ထွင်နိုင်ပါတယ် 2048Gb / s ကိုဗွီဒီယိုသို့မဟုတ် 3-Gigabit Ethernet မှတက်၏အချက်ပြနှင့်အတူ, ကျော်လွန်ပြီး 10 x နှင့်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကြောင့်ပင်လေထုချွတ် Router ကိုယူပြီးမပါဘဲ reconfigured သို့မဟုတ်တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ တစ်ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်ဂီယာစက်ရုံတစ်ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ "
ဒါကြောင့်ဘာလုပ်သလဲ, ငါမေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ဖြေကြားပါမယ် - အဘယျသို့ မ ထိုသို့ပြု? ၎င်း၏ရောထွေး signal ကို routing ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်သေချာဖြစ်ပါသည် - SD က, HD,3Gb / SW / အသံ? ပလက်တီနမ်ရဲ့ကလေ; တစ်ခုတည်း 28RU က 576 × 1024 ဗီဒီယိုထရှိနိုင်ပါသည်ဘောင်ထဲမှာ 1152 နှစ်ခုအပြန်အလှန် frames များကို အသုံးပြု. လျှင် 1024 ×။ ယင်း၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောတိုးချဲ့ပါကတိုက်ရိုက်လွှ On-လေကြောင်းကိုအသုံးပြုခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကျချိန်အကူးအပြောင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်! Yowza! ရလဒ်တွေကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျနှင့်တစ်ဦးအပြုသဘောလုပ်ငန်းအသွားအလာထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်, ပလက်တီနမ် IP3 ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှု, crosspoints, ပါဝါနှင့်အချက်ပြမှုများအတွက် redundancy ပါဝင်သည်။ မရည်ရွယ်သော data တွေကိုပေါင်းစပ်မှရှောင်ရှားရန်, signal ကိုလမ်းကြောင်းအနည်းကိန်းဖြစ်ကြပြီးအသံနှင့်အမြင်အာရုံအပြန်အလှန်များအတွက် crosspoints ရှိသည်။ နေစဉ်လေထုအပေါ်နသည့်အခါချောမွေ့စွာ switching ချောမွေ့ခြင်းနှင့်ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲတဲ့ activation ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပလက်တီနမ် IP3 ယင်း၏အထွတ်မှာလည်ပတ်အသံအသုံးပြုမှုပါဝင်သည်; အသံအချက်ပြ၏ discrete routing ကိုထောက်ခံမှုနှစ်ဦးစလုံးမျှမျှတတနှင့်သည်ညီမျှမှု AES လွှမ်းခြုံ။ AES Mono သို့မဟုတ်စတီရီယိုမှတဆင့် 16 AES အသံစီးအထိထောက်ပံ့မဆိုတစ်ခုတည်းကဗီဒီယိုသွင်းအားစုအပေါ်အသုံးပြုမှုများအတွက် Analog စ IO module တွေအပေါ် embedded နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကတိတ်ဆိတ် switch ကိုအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ audio အရေးပို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အတော်ကြာကောင်းတဲ့ feature များပံ့ပိုးသော Mux / Demux အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ခြင်းဖြင့်ပြုစုလျက်ရှိ၏ (ပင် multiplexed နိုင်သည့်) ကဗီဒီယိုစီးနှုန်းကို streaming audio က၏ 16 လိုင်းများ။ အပြီးအစီး mono ခွဲထွက်အပြည့်အဝပြီးပြည့်စုံပေါင်းစည်းမှု twixt demultiplexed နှင့် discrete အသံအားဖြင့်ရုပ်ပြအဖြစ်, routing ထောက်ခံမှုပေးနေချိန်မှာအကောငျးဆုံးမျှမျှတတအသံအတွေ့အကြုံကိုအားပေးအားမြှောက်။ အဆိုပါပလက်တီနမ် IP3 လုပ်နိုင်သောရိုင်းနှင့် jumbled feed ကိုစားသုံးမိပါနဲ့ audio ရောသမမွှေနေသော်လည်းဘောင်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်တစ်ခုရှစ်ရုပ်သံလိုင်း input ကိုကဒ်ရှိနိုင်ပါသည်။ (16 လိုင်းများအထိ) Demultiplexing လွတ်လပ်သောဗီဒီယိုစီးကြောင်းကိုရဲ့ embedded အသံနှင့်အတူလျှပ်တပြက်ဖြစ်ပါတယ်။
တတ်နိုင်တိုးချဲ့ router ရဲ့ matrix ကိုချဲ့ထွင်မှုမှတဆင့် enabled နှင့်စူပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရလဒျကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် - ယင်း၏ဝိသေသနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်နှင့်အတူ MADI, မြင့်သောသိပ်သည်းဆအသံတိုးချဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ဖို့, ပလက်တီနမ် IP3 အများအပြား modular ဒြပ်စင်များပါဝင်သည်။ coaxial နှင့်ဖိုင်ဘာ interconnectivity ကိုထပ်မံ 8 သို့မဟုတ်9modular I / O အုပ်စုများကထောက်ပံ့ပေးထောက်ခံသည်။ တိုက်ရိုက်လွှ On-လေကြောင်းအသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်ရန်, စနစ်, ပူနေချိန်မှာ Front-တင်နှင့် swappable ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆန္ဒရှိလျှင်အစဉ်အမြဲအသုံးပြုမှုခွင့်ပြုထားတဲ့။ On-လေကြောင်းတိုက်ရိုက်လွှင့်မှုကြီးကိုဟာ့ဒ်ဝဲထိန်းချုပ်မှုပြား၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထောကျပံ့နိုငျသောမက်ဂျလန်™ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, မှတဆင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။ လွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ High-စွမ်းအင်သုံး software နှင့်အသုံးပြုသူ personalizable သောအသွင်နှင့်အတူ web-based apps များအဘို့အခွင့်ပြုခြင်း, အကောင်းဆုံးပေါင်းစည်းမှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ SNMP နှင့် Third-party ရောင်းချသူတစ်ဦး admin ရဲ့-ချိန်ညှိအရင်းအမြစ်နှင့်ဦးတည်ရာဘို့ခွင့်ပြု, မက်ဂျလန် protocols များကထောက်ပံ့နှင့် Access သူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်လုံခြုံရှိနိုင်ပါသည်။
ပလက်တီနမ် IP3 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ကိုအသုံးပြုပြီးအစွန်းစီးလျက်ရှိ၏ ဒါကြောင့်အရာကြွင်းလေအထက်တွင်တစ်ဖြတ်ပါတယ်။ နည်းပညာ၏ဤအထင်ကြီးအပိုင်းအစတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးတက်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာစံဗိသုကာသုံးပြီးအထိထုတ်လွှင့်စစ်ဆင်ရေးစွမ်းရည်ခွင့်ပြု, Multi ဘောင် Configurations နဲ့အစီအစဉ်များမှချိန်ကိုက်စကေးရဲ့ပထမဦးဆုံးအချက်ပြမှုသည် router ရဲ့။ Multiformat အချက်ပြမှုများကိုဧကနျမုခပြွမကြုံစဖူးအရည်အသွေးကိုနှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေကြသည်။ 576 မှတက် 1024 signal ကိုလမ်းကြောင်းတစ် 28RU ဘောင်အတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်×။ multi-frame ကိုအစီအစဉျတှငျ 2Kx2K မှချောမွေ့လာခြင်းတက်အပြင်ဖြန့်ဖြူးချဲ့စက်များသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ဖို့ပြန်လည်ကုမပါဘဲ actualized ခဲ့ပြီး; ဒီလေထုကိုချွတ်လက်မှတ်ထိုးရန်တစ်ဘူတာရုံ၏လိုအပ်ချက်ရပ်ဆိုင်း။ Router ကလည်းအသံ, ဗီဒီယိုနှင့်မြင်ကွင်းစုံအချက်ပြမှုများအဖြစ်က၎င်း၏ဗိသုကာအတွင်းမလိုအပ်တဲ့ crosspoints ထောက်ပံ့ဘို့ကာကွယ်ရေးပေးပါသည်။ လုံခြုံရေးမှဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို nextgen အာရုံကိုမမြင်နိုင်တဲ့နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒေတာဆုံးရှုံးခြင်းမှအားနည်းချက်လျှော့ချရန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ကော်ပိုရေးရှင်း, ဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများ, ကြော်ငြာစနစ်များနှင့် 185 နိုင်ငံများတွင် spanning မီဒီယာကွန်ယက်များ, ထုတ်လွှင့်စခန်းများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်လုပ်ငန်းစျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာ့ဗီဒီယိုအားလိုင်းများ၏ထက်ဝက်ခန့်ထက်ပိုမို3သန်းမှတဆင့်ဖြတ်သန်း ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ကမ္ဘာတဝှမ်းချထားထုတ်ကုန်။ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ အများဆုံးပြည့်စုံအဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်နှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်အိုင်ပီ, ကမ္ဘာပေါ်မှာမိုဃ်းတိမ်ကို-enabled, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ကွန်ယက်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကိုကယ်နှုတ်သောတီထွင်ဆန်းသစ်နေသည်။ အလည်အပတ် www.imaginecommunications.com ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, နှင့် Twitter @imagine_comms အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။
2015 NAB ပြရန် အသံ MADI ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Clark ကမီဒီယာ enterprise-Class Router ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ multiplexing နှင့် de-multiplexing NAB 2015 NAB ပြရန် NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး NEP သြစတြေးလျ အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် ပလက်တီနမ်™ IP3 Multi-path ကို routing ကို Switcher signal ကိုဖြန့်ဖြူး ခေတ်မီမြင်ကွင်းစုံ 2015-05-25
ယခင်: Space ကို (Black က) မှော်! Interstellar!
နောက်တစ်ခု: BroadcastAsia 2015 အဘို့အပစ်စယ်လ်ပါဝါအားဖြင့်အလိုအလျောက်အကြောင်းအရာထုပ်ပိုး
StreamMaster PRIME သည်ဂရပ်ဖစ်၊ အကြောင်းအရာအလိုက်ရုပ်သံလိုင်းဖွင့်ခြင်းနှင့် master control devices များအားရိုးရှင်းစွာအစားထိုးသည်
Senior Hire Oliver Taprogge နှင့်အတူခြံစည်းရိုးနှင့် WaterBear Bolster ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့